Wasaaradi Hargeysa ee Mu Bahdilka ku Ahayd reer Saylac oo waax kale laga sii Faliidhay – Xeernews24
Wasaaradi Hargeysa ee Mu Bahdilka ku Ahayd reer Saylac oo waax kale laga sii Faliidhay
16. Januar 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Wasaaradda Ciyaaraha Somaliland Oo Wasiirka Dhaqanka Ku Wareejisay Waax Laga Gooyay | XeerNew24
Wasiirka cusub ee Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska Jamhuuriyadda Somaliland, Md. Khadar Xaaji Yuusuf, ayaa si rasmi ah ula wareegay waaxda Dalxiiska oo hore uga tirsanayd Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha.
Xaflad loo sameeyay xil-wareejinta waaxdaas oo maanta lagu qabtay xarunta wasaarada dhallinyarada iyo ciyaaraha, waxa ka soo qaybgalay Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, Wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka Wasiir ku xigeennada Wasaaradaha Dhllinyarada iyo Dhaqanka, Wasiiru-dawlaha Ganacsiga, siyaasiyiin iyo dadweyne kale.
Wasiirka Wasaaradda Dhaqanka, Khadar Xaaji Yuusuf oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in si daacad ah ula shaqayn doono shaqaalaha wasaaradda, isla markaana uu soo dhaweynayo cid kasta oo leh aqoonta dalxiiska, “Waxa aan balan-qaadayaa dadka ila shaqaynaya inaan si daacadnimo ah aan ula shaqeyn doono. cidna fogayn maayo, cidna soo dhawaysan maayo. waxa wanaagsan in la noqdo dad isku xidhan oo daacad-nimo ku wada shaqeeya.
Waxaanu gacmo furan ku soo dhawayn doonaa shaqaalaha cusub iyo dadka aan shaqaalaha ahayn ee aqoonta u leh cilmiga Dalxiiiska,waanu wada shaqayn doonaa wasaaraduna noqon mayso wasaarad qof kaliya u xidhan ee waxa ay noqon doontaa Wasaarad ballaadhan oo dadka aqoonta lihi ay hagi doonaan. Aqoontoodana aan ka faa’iidaysan doono,”ayuu yidhi Wasiirka Dalxiisku.
Wasiirku wuxuu intaas ku daray; “Waxaannu u yeedhi doonaa oo kullamo u qaban doonaa cis kasta daneysa Dalxiiska, Aataarta, iyo Dhaqanka, tallooyinka ay soo jeediyaanna waan qaadan doonaa.”
Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Md. Cabdrisaaq Waaberi Rooble, oo isguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiisku tahay mid dalku u baahnaa,waxaannu tilmaamay in uu diyaar u yahay in wixii talooyinna uu siiyo Wasiirka wasaaradaas, “Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiisku waa wasaarad loo baahan yahay madaxweynuhuna wuu asiibay magacaabiseeda. Waxaa hoos yimaada Dalxiiska Huteelada waawayn.
Waxaa loo baahan yahay in la baadi doono hawshaasi waxa ay u taalaa wasaaradda cusub iyo waaxyaheeda kala duwan, sidii halkaa uga sii wadi lahaayeen,wixii talooyinna ee aanu hayno diyaar ayaanu u nahay waanan idinla garab joogaynaa. Waxaan wareejinayaa shaqaalihii waaxda Dalxiiska oo tiroodu tahay 50 qof,”ayuu yidhi Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaruhu.
Wasiir ku-xigeenka Ciyaaraha Mr. Cabdirashiid Ismaaciil Kaahin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa xusay in uu ku faraxsan yahay in waaxdii Dalxiiska noqoto wasaarad madaxbannaan,waxaanu yidhi, “Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in waaxdii Dalxiisku ay noqoto wasaarad madaxbannaan. Dalxiisku waa meel wax soo-saar,waxay noqon doontaa meel wax la taaban karo uu ka soo bixi doono wasaaradaasi,rageediinna waa joogaan, siyaasadii dalxiiska iyadoo gacanta lagu hayo qoritaankeedii ayaa la magacaabay Wasaaradan.”
Sidoo kalena, waxa madashaas ka hadlay La-taliyaha Madaxweynaha Somaliland ee arrimaha Doorashooyinka, Cabdilaahi Cabdi Xaaji Cumar (Cabdilaahi Jawaan) iyo siyaasiga Maxamed Axmed Caalin (Tiimbaro), waxaanay sheegeen in wasaaradan cusubi ahayd mid dalku baahi weyn u qabay, waxaanay madaxweynaha ku bogaadiyeen hirgelinta wasaaradaas.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/01/qulujeed.png 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-01-16 09:30:032017-01-16 09:33:01Wasaaradi Hargeysa ee Mu Bahdilka ku Ahayd reer Saylac oo waax kale laga sii Faliidhay
Doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Gobolada waqooyi oo Muqdisho ka dha... Maraakiib Shisheeye Oo Xaalufin Xoog Leh Ku Haya Badda Saylac Iyo Magaca Masuul...